COVID-19 - SOOMAALI
Soomaali - COVID-19
MPS Home > Schools > COVID-19 Health and Safety > Soomaali - COVID-19
Waxaa la cusbooneysiiyay:bisha Ogosto 24, 2021
Caafimaadka iyo Badbaadada
Fursadaha Waxbarashada Qadka Tooska ah
Waxarashada masaafada fog oo aan si rasmi ah loo heli karin ama loo baahnayn
Dugsiga MPS Online
Daboolida Maaskaraha wejiga
Daboolista wejiga ayaa loo baahan yahay
Ka -dhaafitaannada wejiga daboolidda
Kala fogeynta bulshada/jirka
Booqdayaasha iyo mutadawiciinta
Nadiifinta iyo jeermiska
Go'aaminta marka ardaygaaga guriga lagu hayo haddii ay jiran yihiin
Haddii ardaygu ku xanuunsado dugsiga
Ardayda aan la tallaalin
Haddii arday si buuxda loo tallaalo
Tallaallada COVID -19 oo bilaash ah iyo baaritaan
Caafimaadka iyo badbaadada ardayda MPS, qoysaskooda, iyo shaqaalaha ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Tilmaanta hoos ku qoran waxay raacaysaa talooyinka ka yimid Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH): Ku-dhaqanka ugu Wanaagsan ee Ka-hortagga COVID-19 ee Dugsiyada sannad-dugsiyeedka 2021-22, kaas oo la jaan qaada Xarumaha Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (CDC).
Daboolida wejiga maaskaraha ayaa loo BAAHAN YAHAY dhammaan shaqaalaha, ardayda, iyo dadka soo booqda ee ka weyn 2 sano jir iyadoon loo eegin xaaladda tallaalka shaqsi ee dhammaan dhismayaasha MPS laga bilaabo Ogosto 9, 2021. Daboolidda wejiga ayaa sidoo kale looga baahan yahay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan basaska dugsiga.
Joogtaynta 3 - 6 fiidh ee fogeynta bulshada ayaa weli lagu talinayaa, gaar ahaan ardayda da'da yar iyo dadka aan la tallaalin.
MPS hadda ma bixineyso ikhtiyaarka barashada masaafada fog. Qoysasku waxay haystaan ikhtiyaarka ah inay dhigtaan MPS Online School, laakiin ardayda diiwaangashan waxay iska diraan diiwaangelinta dugsiyadooda hadda sidaa darteed tani ma aha ikhtiyaar waqti-gaaban ah ama ku-talinta barashada masaafada rasmiga ah ee MPS. Nidaamyo ayaa la dejiyay haddii degmo dugsiyeedka gobolku ku qasbo inay bixiyaan ikhtiyaar waxbarasho masaafo oo ku saleysan heerka caabuqa.
Marka sannad dugsiyeedku sii socdo, MPS waxay sii wadi doontaa la socodka heerarka Heerka Caabuqa COVID-19 waxayna cusboonaysiisaa hababka caafimaadka iyo badbaadada sida ay ku taliyeen wakaaladaha caafimaadka ee maxalliga ah iyo kuwa qaranka..
Fursadaha Waxbarasha Masaafada Fog
Waxbarashada masaafada fog aan si rasmi ah loo heli karin ama loo baahnayn
Waxbarashada masaafada fog hadda looma baahna sannad dugsiyeedkaan iyadoo la waafajinayo guddoomiyaha iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Ardayda MPS waxaa laga filayaa inay si toos ah u tagaan dugsiga oo daboolaya wejiga maaskaraha, taas oo looga baahan doono dhammaan ardayda, shaqaalaha iyo booqdayaasha. Qof kasta oo jira 12 sano iyo ka weyn oo xaq u leh in la tallaalo waxaa si weyn loogu dhiirigelinayaa inay sidaas sameeyaan. Si aad u ogaato meesha aad ka heli karto tallaal bilaash ah, booqo: Hel Goobaha Tallaalka.
Fadlan ogow in ardayda ay tahay inay karantiil sameeyaan sababtuna tahay inay u dhowdahay qof qaba COVID-19 waxay awoodi doonaan inay sii wataan waxbarashadooda iyaga oo u maraya ikhtiyaar waxbarasho oo onlayn ah macallimiintooda caadiga ah
Arday badan ayaa ku baraarugay barashada masaafada intii ay socdeen masiibada in ay ku barwaaqoobaan oo ay doorbidaan barashada farsamada. Iyada oo ka jawaabaysa, MPS Online School waxay ballaarisay Dugsiga Online -ka ee MPS laga bilaabo barnaamij dugsi sare ilaa dugsi rasmi ah, oo hadda ay heli karaan ardayda laga bilaabo xannaanada illaa fasalka 12aad.
MPS Online School wuxuu bixiyaa fasallo taageero leh, oo tayo sare leh meel kasta wuxuuna la mid yahay dugsi kale oo leh bulsho arday, macallimiin iyo shaqaale u heellan baahiyaha tacliimeed iyo shucuureed ee ardayd.
Qoysaska doorta MPS Online School waa in ay ogaadaan in ardaydu ay waayaan kuraastii ay ku lahaayeen bulshadii asalka ahayd ama dugsiyada magnetka. Si kastaba ha ahaatee, ardaydu waxay haystaan ikhtiyaarka ah inay dib iskugu qoraan dugsigoodii asalka ahaa dhammaadka rubuc-dugsiyeedka ama semester-ka waana la meelayn doonaa haddii kuraas la heli karo. Haddii kuraasta halkaas laga waayo, ardayda waxaa lagu meeleyn doonaa dugsi
Daboolida wejiga Maaskaraha
Daboolista wejiga maaskaraha ayaa loo baahan yahay
Laga bilaabo Ogosto 9, 2021, daboolista wejiga ayaa looga baahan yahay dhammaan dhismayaasha MPS dhammaan shaqaalaha, ardayda, iyo booqdayaasha ka weyn 2 sano, iyadoon loo eegin xaaladda tallaalka shaqsiga. CDC waxay sii wadaysaa inay u baahdo daboolida wejiga gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan basaska dugsiga.
Daboolidda wejiga oo la aqbali karo waxaa ka mid ah daboolidda wejiga oo ku habboon, marada, bandanada. Gashaanka wejiga ayaa la gashan karaa marka lagu daro daboolidda wejiga, laakiin ma aha beddelka daboolidda wejiga.
Waxaa lagu talinayaa in ardayda iyo shaqaalaha aan si buuxda loo tallaalin ay sidoo kale xidhaan wejiga daboolidda meelaha bannaanka ah ee dadku ku badan yihiin ama inta lagu jiro hawlo ku lug leh isu imatinka dhow oo joogto ah oo lala yeesho dadka kale ee laga yaabo inaan la tallaalin.
Ka-dhaafitaannada wejiga daboolidda
Waxaa jira xoogaa ka-dhaafitaanno ah oo looga baahan yahay daboolidda wejiga ardayda ka weyn labada sano haddii ardaygu leeyahay xaalad caafimaad oo gaar ah, korriin, ama dabeecad. Qoysasku waxay u baahan doonaan inay la hadlaan bixiye daryeel caafimaad oo ruqsad haysta si ay u ogaadaan haddii laga yaabo in ardaygooda laga dhaafo xirashada wejiga. Marka loo baahdo, qoysasku waa inay dib -u -eegaan oo buuxiyaan foomka Wajiga Ardayga Daboola Foomka Ka -dhaafitaanka Caafimaadka.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira waqtiyo marka la xirto dabool wejiga aysan suurtagal ahayn. Xaaladahan, waxaa muhiim ah in la joogteeyo fogeynta bulshada ugu yaraan 6 fiidh dadka kale intii suurtogal ah.
Carruurta da'doodu ka yar tahay laba sano waa inaysan xirmin wejiga.
Marka qof wax cunayo ama cabbayo.
Xaaladaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay daboollada wejiga ka dhigaan kuwo aan ammaan ahayn waana inaan la xidhin sida marka dabbaasha ama waxqabadyo kale oo qoyn doona ama quusin doona wejiga daboolista biyo.
Ardayda leh xaalado caafimaad, naafo ama baahiyo gaar ah sida hoos ku qoran. Qoysasku waxay u baahan doonaan inay buuxiyaan foomka Foomka maaskaraha Wajiga Ka-dhaafitaanka Caafimaadka ardayga:
Haddii ardaygu qabo xaalad caafimaad oo adkeyneysa neefsashada ama uusan awoodin inuu iska bixiyo daboolida wejiga caawimaad la'aan.
Marka la xidho dabool wejiga ayaa ka dhigaya isgaarsiinta mid adag ama xitaa aan suurtogal ahayn, sida arday dhagoole ah ama maqal adag.
Kala fogeynta bulshada/jir ahaan
Joogtaynta 3-6 fiit ee kala fogeynta bulshada ayaa weli lagu talinayaa, gaar ahaan ardayda da'da yar iyo dadka aan la tallaalin. Ardayda ka yar 15 ayaa ka niyad -jabi doona inay isugu yimaadaan waddooyinka, meelaha la wadaago iyo musqulaha
Ardayda iyo shaqaaluhu waxay samayn doonaan kooxo yaryar oo wada jooga intii suurtogal ah maalintii oo dhan iyo maalinba maalinta ka dambaysa, gaar ahaan ardayda yaryar ee aan weli u qalmin in la tallaalo (ardayda ka yar 12 sano).
Kooxaha yaryar waxay ilaalin doonaan 6 fuudh oo midba midka kale u dhexeeyo iyo isku darka aan loo baahnayn ee kooxaha ayaa la xadidi doonaa intii suurtogal ah, sida xilliga qadada, nasashada musqusha, imaanshaha iyo cayrinta, xilliyada xorta ah, nasashada, iwm.
Sababtoo ah darawalnimada baska maxalliga ah awgeed, basaska ayaa si hagar la'i ah u buuxin doona awooddooda. Ardayda waxaa loo qoondeyn doonaa kursi si ay uga caawiyaan raadinta xiriirka COVID, haddii loo baahdo. Dhammaan ardayda iyo dadka waaweyn ee baska saaran waxaa laga rabaa inay xidhaan dabool wejiga inta raacitaanka oo dhan. Fadhiga baska waxaa loo qabanqaabin doonaa inuu sii jiro 6 fuudh oo u dhexaysa darawalka iyo dhammaan wadayaasha.
Basaska si joogto ah ayaa jeermis loo siinayaa iyada oo si gaar ah loo fiirinayo meelaha aadka u taabashada badan. Daaqadaha iyo saqafyada saqafku way furnaan doonaan marka ay suurtogal tahay si loogu oggolaado hawo -qaadka ugu badan ee suurtogalka ah.
Joogtaynta 6 fuudh oo u dhexaysa kooxaha ardayda waqtiga cuntada ayaa lagu talinayaa. Ardaydu waxay ku cuni doonaan qolalka qadada ama meelaha kale ee la wadaago hadba sida loogu baahdo. Jaantusyada fadhiga ayaa sidoo kale lagu talinayaa.
Sababo la xiriira caafimaadka iyo nabadgelyada awgood, safarada dibadda ee caalamiga ah lama oggolaan doono. Daboolida wejiga waa in la xidhaa mar kasta marka la saaran yahay baska MPS iyo dhisme kasta oo ka mid ah booqashada safarka. Joogtaynta 3 fiit ee fogeynta bulshada ee u dhexeysa kooxaha ardayda inta lagu jiro safarka garoonka ayaa sidoo kale lagu talinayaa.
Tilmaanta 2020 ee safarada ciyaaraha ayaa sii jiri doonta. Tilmaamaha gaarka ah ee ka socda Ururka Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota waxaa laga heli karaa xiriirkan.
Booqdayaasha iyo mutadawiciinta waxaa loo oggolaan doonaa dugsiyada inay taageeraan barnaamijyada tacliinta iyo barnaamijyada kale. Dhammaan booqdayaasha iyo mutadawiciinta waa inay ku xirtaan daboollada dhammaan dhismayaasha MPS oo ay joogteeyaan fogeynta bulshada ugu yaraan 3 fuudh.
Goobaha aadka u taabashada badan iyo isku socodka hoolalka dugsiyada ayaa la nadiifin doonaa oo jeermi-dilmi doonaa maalin kasta sida ku habboon sida fasallada iyo xafiisyada, musqulaha dadweynaha, hoolalka iyo jaranjarooyinka waaweyn, ilaha cabbitaanka, sagxadaha jimicsiga, iyo qolalka labiska.
Nidaamyada hawo -Nadiifinta
Dhaqannada tayada hawada ee adag ayaa la raaci doonaa iyadoo hababka maaraynta hawada loo shidaayo ugu yaraan laba saacadood ka hor iyo ka dib marka ardayda iyo shaqaaluhu ku jiraan dugsi. MPS waxay isticmaashaa miirayaasha hawada ugu sarreeya ee la heli karo: MERV11-14 halka ay suurtogal tahay. Miirayaasha HEPA waxaa loo adeegsan doonaa fasal kasta oo aan lahayn awood uu ku taageero MERV 14 filtarrada hawada.
MPS waxay qoysaska u diyaarinaysaa hagaha qoysaska si ay uga caawiso inay go'aan ka gaaraan goorta ay ardaydooda ka ilaalinayaan inay waxbartaan qof ahaan haddii ay dareemayaan caafimaad darro. Tilmaan -bixiyaha ayaa tilmaamaya astaamaha si loo raadsado taas micnaheedu waa in ardaydu guriga joogaan.
Qoysasku waxay kaloo ka caawin karaan dugsiyada inay furnaadaan oo ay ka hortagaan faafitaanka COVID-19 iyagoo samaynaya waxyaabaha soo socda:
Ardayda guriga ku hay haddii ay jiran yihiin. MAALIN WALBA, hubi si aad u ogaato haddii ardaygaagu leeyahay astaamaha jirro.
Ku hay ardaygaaga guriga haddii uu ku dhacay COVID-19.
Bar ardayga inuu xirto wejigooda (maaskaro) baska iyo dugsiga.
Hagaha waxaa ku jira macluumaad kale oo muhiim u ah qoysaska:
Waxa la filayo haddii ardaygaagu dugsiga ku xanuunsado.
Hubi in dugsigaagu haysto macluumaadkaaga xiriirka ee hadda.
Qorshe u yeelo qofka qaadi kara ardaygaaga haddii ay dugsiga ku xanuunsadaan
Hanaanka MPS ee u gudbinta qoysaska kiisaska COVID-19.
FIIRO GAAR AH: Haddii ardaygaagu ku khasban yahay inuu karantiil sameeyo sababtuna tahay inuu ku dhacay COVID-19, qoysasku waa inay la xiriiraan dugsiga si ay u helaan qorshooyinka casharka:
Meel go'an oo u dhow xafiiska kalkaaliyaha ayaa loo qoondeyn doonaa arday kasta oo bilaaba inuu muujiyo astaamaha COVID-19. Qolka jiradaan ayaa si cad loo calaamadeyn doonaa oo hawada hawada qolkan ilaa qolalka kale waxaa lagu ilaalin doonaa shaandhooyin HEPA oo dheeri ah.
Ardayga waa laga sooci doonaa dadka kale ilaa ay ka soo qaadaan waalid ama mas'uul. Gaadiid ayaa la siin doonaa arday kasta oo waalidka/mas'uulka uusan ku soo qaadan karin waqti macquul ah.
Haddii ardaygaagu qasab ku noqdo inuu guriga joogo sababtuna tahay inuu qabo COVID-19 ama inuu xiriir dhow la leeyahay qof qaba COVID-19, ardaygaagu wuxuu u baahan doonaa inuu guriga joogo 14 maalmood si karantiil loo sameeyo. Haddii ardaygaagu caafimaad qabo, laakiin u baahan yahay inuu karantiil sameeyo, waxay la socon karaan shaqadooda koorsada iyagoo u maraya waxbarasho fog. Raac talooyinkan karantiilnimada ee Waaxda Caafimaadka Minnesota.
Takooriddu micnaheedu waa in jidh ahaan laga sooco dadka kale. Ka-reebitaanka ardayda haddii ay la kulmeen qof qaba COVID-19 waxay ku xirnaan doontaa haddii ardayga si buuxda loo tallaalay iyo in kale sida hoos ku qoran.
Karantiilku wuxuu ka caawiyaa dadka kale inay ka qaadaan COVID waxayna yareeyaan faafitaanka fayraska. Karantiiliddu waxay bixisaa waqti si loo arko haddii qof qabo COVID-19. Dadka qaba COVID-19 waxay u gudbin karaan dadka kale ka hor inta aysan bilaabin inay dareemaan xanuun ama laga yaabo inaysan waligood yeelan wax astaamo ah oo muujinaya COVID-19.
Qoysasku waa inay wacaan xafiiska caafimaadka dugsigooda si ay shaqaalaha u ogeysiiyaan in ardaygaaga loo sheegay inuu karantiil sameeyo.
Laba cusbooneysiin caafimaad iyo badbaado oo muhiim ah ayaa dhaqan gala Oktoobar 15:
Tallaalka MPS wuxuu farayaa shaqaalaha, qandaraaslayaasha, iyo mutadawiciinta inay caddeeyaan midkood tallaalka COVID-19 ama baaritaan joogto ah ayaa bilaaban doona.
Xilliga karantiil ee khasabka ah wuxuu ka gaabin doonaa 14 illaa 10 maalmood shaqaalaha aan la tallaalin ama ardayda xiriir dhow la leh qof qaba COVID-19.
MPS waxay yareyneysaa karantiilkii loo baahnaa si loo hubiyo in ardayga qof ahaan wax u barto intii suurtagal ah waxayna sameyneysaa ka dib markii ay kala hadashay khubarada caafimaadka kooxdayada Taageerada Gobolka ee COVID-19. Cilmi-baarista hadda jirta, iyadoo la sameeyay ka hor intaan la beddelin Delta, waxay tilmaamaysaa oo keliya hal boqolkiiba halis ah fiditaanka sii kordhaya ee ka dhashay isbeddelkan. Macluumaad dheeraad ah oo ka socda CDC ayaa laga heli karaa halkand oo ku saabsan yareynta dhererka karantiilnimada.
I Xaaladaha qaarkood, 14-ka maalmood ee karantiilidda ayaa weli laga yaabaa in loo baahdo iyada oo ku saleysan tirada dadka cudurka qaba, waqtiga iyo halista soo-gaadhista (Eeg: “Talooyinka Ku-Dhaqanka Ugu Fiican ee Ka-hortagga Covid-19 ee Dugsiyada”) ” and “Best Practices for Wax-ka-qabashada Kiis la Xaqiijiyay COVID-19 ” iyada oo loo marayo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota).
Cusboonaysiintaan waxay khuseysaa karantiilinta lagu taliyay Oktoobar ama ka dib. 15 Karantiiliyada horay loo soo saaray waa inay sii socotaa 14 maalmood oo buuxa ujeeddooyin maareynta kiiska.
MPS waxay sii wadaysaa inay u baahdo daboolidda dhammaan dhismayaasha, fogeynta bulshada markay suurtogal tahay, waxayna si weyn ugu talineysaa tallaalka kuwa u qalma. Waad ku mahadsan tahay taageeradaada markaan ka wada shaqeyneyno inaan isku dheelitirno amniga ardayga iyo shaqaalaha siinta ardayda waxbarasho tayo sare leh, oo qof ahaan ah.
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dadaallada aan ku maareyno COVID-19 COVID-19 dashboard iyo bogga Daily Home Health Screening.
Tallaalada bilaashka ah ayaa heli kara qof kasta oo 12 sano iyo ka weyn ah
In si buuxda loo tallaalo waa habka ugu wanaagsan ee looga gaashaaman karo COVID-19. Tallaalada bilaashka ah ayaa loo heli karaa qof kasta oo 12 sano iyo ka weyn ah. Tallaaladu waa u bilaash qof walba, iyadoon loo eegin xaaladdooda socdaal. Aqoonsi ama caymis looma baahna marka la tallaalayo. Si aad u ogaato meesha aad ka heli karto tallaal lacag la'aan ah, booqo: Hel Goobaha Tallaalka Bilaashka ah.
Ikhtiyaarada tijaabada COVID-19 oo lacag la'aan ah
Waxaa jira fursado badan oo tijaabo COVID-19 oo lacag la'aan ah:
Qalabkalagu baaro cudurka ayaa loo heli karaa ardayda MPS, iyo haddii loo baahdo, si ay u geeyaan xubnaha qoyskooda meel kasta oo ay ku yaalliin xarumo caafimaad oo dugsi ku salaysan.
Soo gal ama ballan ballan ballan bilaash ah mid ka mid ah 11-ka goobood ee gobolka ee gobolka Minnesota oo dhan: Goobaha baaritaanka Bulshada ee COVID-19..
Ka dalbo imtixaan lacag la'aan ah barnaamijka tijaabinta guriga ee gobolka: baarida .COVID-19 ee Guriga .
Ka hel ikhtiyaarro kale oo imtixaan oo u dhow iyaga oo maraya khariidadaha Goobaha Imtixaanka ee gobolka, oo ay ku jiraan bixiyeyaasha maxalliga ah, farmashiyeyaasha iyo rugaha caafimaadka: Raadi Goobaha Imtixaanka.